China ifaskoti yokuthutha mveliso kunye nabathengisi | Sofiq
Isetyenziswa ngokubanzi koomatshini, isiseko, isinyithi, ikhemistri, izixhobo, amandla, ezemigodi, kunye namanye amacandelo oshishino, I-Apron Conveyer yemodeli ye-BLT luhlobo lwenjongo yokuma kwezixhobo zothutho.
Isetyenziswa ngokubanzi koomatshini, isiseko, isinyithi, ikhemistri, izixhobo, amandla, ezemigodi, kunye namanye amacandelo oshishino, I-Apron Conveyer yemodeli ye-BLT luhlobo lwenjongo yokuma kwezixhobo zothutho. Isetyenziswa ekuthuthweni kwezinto ezinkulu ezisasazekileyo okanye ubunzima besiqwengana ngokukodwa ekulungelelanisweni kwezinto zomthamo omkhulu, ubukhali, ubunzima obunzima, ubushushu obuphezulu kunye nokudleka. Okwangoku, iinkqubo ezinjengokupholisa, ukomisa, ukufudumeza, ukucoca kunye nokuhlelwa kungenziwa ngexesha lokuhamba.
Ifaskere yokuhambisa izinto eziphezulu zeTepepature ezenziwe e-China
Ityala ngamaplanga, yetreyi ngamaplanga, okanye njengemfuno zakho ezizodwa.
Lo matshini unokwahlulwa, oko kuya kusinceda sinciphise indawo yokuhamba.
Siza kulungiselela indlela efanelekileyo kunye nezothutho.
Ixesha lokusiwa kweentsuku ezingama-30 emva kokufumana idiphozithi
Ifaskoti yokuhambisa luhlobo lwepleyiti yokuhambisa izixhobo. Kukulungiswa kwemathiriyeli eluhlaza okanye inkqubo yenkqubo yemveliso eqhubekayo.
Ubude bayo bokuhambisa bunokufikelela kwiimitha ezingama-40-80.
Ifaskere yokuhambisa ngumthuthi ohamba emhlabeni, inokuba ithe tyaba, ujonge kwicala lokuhambisa izinto. Isixhobo sokuhambisa isixhobo sokuhambisa ipleyiti, hayi kuphela amandla amakhulu, ukusebenza okuphezulu, umsebenzi onokuthenjwa.
Ifanelekile ukuhambisa ibhloko, i-particle kunye ne-powder material.Ingasetyenziselwa ukuhambisa izinto ezibukhali nezishushu.
1) Isampulu yesakhiwo, ukusebenza okunokuthenjwa, ubomi obude, ukufakwa ngokulula kugcina.
2) Ubude bokuhambisa bunokufikelela kwiimitha ezingama-80.
3) Unokuphumeza ukuhambisa ngokuthe tyaba okanye ukutyekela.
Xa kuthelekiswa nemodeli ye-BLT, i-Apron Conveyer yemodeli ye-JYB ilungele ukuhambisa ukuphoswa okunzima.
Ukucaciswa kwefaskhethi yokuhambisa
Ububanzi befaskoti (mm)
Ukuphakama kwesitya (mm)
Umthwalo ovumelekileyo wokuTsala (kg)
Ubungakanani bendawo evunyelweyo β
Ukuphakama kwetyathanga (mm)
Ummiselo weSantya esingu-0.8-6
Egqithileyo Umatshini oxwesileyo wokuphosa umatshini wokucoca isanti
Flask zomngundo Machine, Semi-oluzenzekelayo Umatshini Ukubumbela, Ukubumba Ivoti Flask, Ibhokisi yesanti, Umatshini wokukroba ngaphandle, Esingxobeni Ukubumbela,